Fianarantsoa : voasazy 5 taona an-tranomaizina ilay polisy vavy nandoro ny mpiasany | NewsMada
Fianarantsoa : voasazy 5 taona an-tranomaizina ilay polisy vavy nandoro ny mpiasany
Nomelohin’ny fitsarana sazy mihatra dimy taona an-tranomaizina niampy onitra 5 tapitrisa Ar ilay polisy vavy nanao herisetra tamin’ny mpiasa an-tranony. Nivoaka omaly ny didim-pitsarana momba ity raharaha ity…
Nivoaka omaly maraina, araka izany, ny didim-pitsarana nanenjehana ity polisy vavy ity sy ny olona mpiray tsikombakomba taminy izay nanondraka rano mangotraka sy nanao herisetra tamin’ny tovolahy iray antsoina hoe Naivo, mpiasa an-tranony, ny volana janoary lasa teo. Tsy afa-bela manoloana ny fitsarana ity mpitandro filaminana ity sy ilay olona niray tendro taminy momba ity fampijaliana sy herisetra ity. Raha dimy taona ny an’ilay polisy, roa taona kosa ny an’ilay mpiray tsikombakomba aminy, saingy samy mandoa onitra 5 tapitrisa Ar avy kosa izy ireo.
Efa nahazo fahafahana vonjimaika ny lehilahy niara-voampanga tamin’ilay polisy vavy momba ity fanaovana herisetra ity. Ny fianakaviamben’ny polisim-pirenena anefa no indray voahoso-potaka amin’ny fihetsika tsy voahevitra nataon’ny hafa toy izao. Tokony hojeren’ny tompon’andraikitra akaiky koa ny fanadihadiana ara-moraly mialoha ny handraisana ireny mpitandro filaminana ireny mba hisorohana ny fihetsika mahamenatra toy ity nitranga tao Fianarantsoa ity. Lasa ialokalofan’ny olona tsy mahita asa koa izy ireny ka na hatramin’ny tsy tokony ho mpitandro filaminana aza voaray rehefa manao lalana ambanin’ny tany na mahafantatra olona ambony sy/na mandoa ekolazy kely miampy ny tsindry bokotra eny am-pandehanana. Misy lesona azo tsoahina momba ny mpiasam-panjakana diso manampatra fahefana ny toy izao. Tsy misy ambonin’ny lalàna na iza na iza fa tsy maintsy ampiharina amin’izay mandika lalàna ny lalàna rehefa misy tsy mety atao. Misy rahateo ireo mihevitra fa afa-manao izay tiany hatao satria manana olona ambony afaka miaro azy ka manao izay danin’ny kibony hatrany izy.